Other News | Artist Khabar | Page 6
Other News	प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलमा मोबाईल थिएटर समापन	माघ, काठमाडौं । काठमान्डौ प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलमा चारदिन सम्म चलेको मोबाईल थिएटर समापन भएको छ यहि माघ २० गतेदेखि सञ्चालन भएको थिएटरमा कक्षा तिन देखी ७ सम्मका बिद्यार्थीहरु सहभागि थिए ।
पहिलो दिन स्कुलका कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरुले नाटक ‘पहेँलो बस’ मञ्चन गरे । जसमा गाउँकी एक चेलीलाई शहर पढाउनका लागी ल्याइन्छ तर बिभिन्न काममा लगाएर चरम..	प्रियंकाले अभिनय गरेको भारतीय बिज्ञापन भाईरल बन्दै (भिडियो)	माघ, काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की पछिल्लो समय कुनै चलचित्रको काममा छैनिन् तर उनको ब्यस्तता भने निकै देखिन्छन् । कहिले देश बाहिरका कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त हुन्छिन् भने देशभित्रका बिभिन्न म्युजीक भिडियो, बिज्ञापनहरुमा देखिइरहेकी हुन्छिन् ।
प्रियंका कार्की नेपालका बिभिन्न ठुला कम्पनीहरुको ब्राण्डहरुको एमबेस्टर पनि भइसकेकी..	अर्को गिरान्चौर एकीकृत बस्ती बनाउन आफ्नो पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने सिइओ पोखरेलको घोषणा	माघ, सिन्धुपाल्चोक । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले एकीकृत बस्ती पुननिर्माणमा देखिएका नीतिगत समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने बताउनुभएको छ । सामुदायिक पुनर्निर्माण पर्यटन प्रर्वदन परियोजनाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ८ गिरानचौरमा शुरु गर्न लागेको..	बलिउडमा यसरी हुन्छ रोमान्टिक गीतको सुटिङ (तस्बिर)	माघ, काठमाडौं । हामीले फिल्महरु त हेर्ने गर्दछौं । तर ति फिल्म कसरी सुटिङ हुन्छन् सुटिङ गर्दा के कस्तो समाग्रीहरु प्रयोग भएको हुन्छ यस्ता कुराहरु फिल्म बनाउने युनिट भन्दा अन्यलाई कमै थाहा होला । हामी आज यहाँ बलिउडमा सुटिङ हुने फिल्मको भित्रको रोमान्टिक गीतहरुको सुटिङको कुरा गर्दैछौं । रोमान्टिक गीत कसरी सुटिङ हुन्छ क्याप्सन सहितको तलको..	आजबाट धुर्मुस सुन्तलीको प्रेरणाबाट मुसहरका ३५ जना बच्चा कखरा सिक्दै	माघ, बर्दिबास । महोत्तरीको बर्दिबास २ मुसहर बस्तीका अभिभावकहरुले एकै साथ ३५ जना आफ्ना साना नानीहरुलाई आजबाट कखरा लेखाउन र पढाउन सुरु गरका छन् । शिक्षाको ज्योतिबाट परेका मुसहरहरु श्रीपञ्चमी (सरस्वती पूजा)को दिन मुसहरहरुले आफ्ना नानीहरुलाई आज बुधबारबाट हातमा कलम र कपी हालि दिएर पढाउन सुरु गरेका हुन् ।
धुर्मुस सुन्तलीको प्रेरणाबाट..	पोखरामा चार दिने ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ सुरु	माघ, पोखरा । पोखराको फेवाताल किनारास्थित नेपाल पर्यटन बोर्ड परिसरमा चार दिने छैटौं संस्करणको ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ सुरु भएको छ । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य महोत्सवमा ४० वटा सत्रमा सयभन्दा बढी साहित्यकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, कलाकर्मी र विश्लेषकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बुकोरम फाउन्डेसन र रेन्डम..	अदालतमा सलमानको २१ महिनापछि उहि डाईलग ‘बुवा मुसलमान, आमा हिन्दू’	माघ, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानले राजस्थानमा चलचित्र सुटिङका क्रममा हरिणको शिकार गरेको आरोप खेपिरहेका बेला २१ महिनापछि शुक्रबार एकपटक फेरि उही चर्चित बयान दिनु पर्यो ।
‘म इन्डियन हुँ’ । ‘अदालतको गम्भीर कारबाहीमा सलमानले बुवा मुसलमान हुन्, आमा हिन्दू’ भनिएको यो फिल्मी बयानका समेत पुनः दोहोर्याएका छन् । न्युज १८ लेख्छ, सन २०१५ मई..	मलेसियामा भोलीबाट हुने ‘युनिक धमाका ४’ का लागी कलाकारको टोली मलेसिया पुग्यो	माघ, काठमाडौं । मलेसियामा भोली शनिबार बाट शुरु हुने युनिक धमाका ४ का लागी सम्पुर्ण कलाकारहरु मलेसिया पुगेका छन् । चाइनिज नया बर्षको अवसर पारेर मलेसियाको बिभिन्न शहरमा हुने ‘युनिक धमाका ४’ साँस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालबाट ९ जनाको कलाकारको टोली मलेसिया पुगेको हो ।
जम्मा तिनदिन सम्म चल्ने उक्त कार्यक्रम जनवरी २७ बाट हुने भनिए पनि..	नारायणको ‘नाकैमा झम्के फुली’ सार्वजनिक (भिडियो)	माघ, काठमाडौं । गायक नारायण राईको 'नाकैमा झम्के फुली' बोलको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरीएको छ । यसभन्दा अघि पनि केहि गीतहरु गाइसकेका नारायणले यस पटक भने केहि फरक रोमान्टिक गीत गाएका हुन् ।
नारायणको एकलआवाजमा रहेको उक्त गीतमा लय तथा शब्द भने डम्बर हिंगमानको रहेको छ । सार्वजनिक भिडियोलाई रबिन शंकरले निर्देशन गरेका हुन् भने भिडियोमा रबिन..	पोखरामा छैटौं नेपाल साहित्य महोत्सव हुँदै	माघ, पोखरा । पोखरामा शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म छैटौं नेपाल साहित्य महोत्सव गरिने भएको छ । महोत्सवमा भारत र भूटानलगायत नेपालका गरी ८५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहने बताइएको छ । विचारक, कलाकार र साहित्यका स्रष्टाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यले गर्न लागिएको यस महोत्सव चार दिनसम्म चल्नेछ ।
वुकोरम फाउन्डेशन र ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटीको..	Pages:«123456789...47»